Waa maxay Lugood playlist iyo Smart playlist?
> Resource > Lugood > Waa maxay Lugood playlist iyo Smart playlist ah?
Playlist, sida ka muuqata "Play + List", si fudud yahay liiska heesaha oo la ciyaari karay mid kale ka dib, sequentially ama iskushaandheeyay. Waxaad fiirsan kartaa playlist ah sida adiga kuu gaar ah isku duwidda music . Lugood sidoo kale wuxuu fikirka la mid ah playlists in uu abaabulo music, laakiin si ka badan oo horumarsan.
Waxa jira laba nooc oo kala duwan oo playlists in Lugood, kuwaas oo ah 'playlist' iyo 'Smart playlist'. Waxaad u baahan doontaa in aad gacanta ku darto heeso ama raad si aad playlist u gaar ah, halka dambe, waxa ay si toos ah u go'aansan doonaa in aad heeso galay playlists kala duwan. Labada kala duwan oo hab iyaga u gaar ah iyo faahfaahin dheeraad ah, qaado iyaga akhriska ee cinwaanka ay gooni ah ka hooseeya.
Way fududahay in la abuuro playlist guud ee Lugood. Si fudud u weeraray on calaamad + ku qoran geeska bidix ee hoose Lugood ama qabsan ' Command + N 'ka File> New playlist . Markaasaa waxaa u sheeg magaca kasta oo aad rabto. Laakiin playlist cusub ee abuuray weli bannaan. Waxaad u baahan doontaa in aad heeso daro in playlist gaar ah ka dib markii iyaga la dooranayo in Music Maktabadda ama playlist jira.
Si aad u dooratid songs duwan ee hal mar, riix kuwan raadkaygay ku doonay halka amarka ama Ctrl muhiimka ah (Mac ama Windows) hoos u haysta. Ka dibna, iyaga jiitaa-iyo-hoos u galay playlist ah. A calaamad lagu daray cagaaran iyo tirada kuwan raadkaygay xulay muuqan doonaa.
Lugood Smart playlist
Playlist Smart waa playlist firfircoon iyo raadinta ku salaysan. Waxay qabtaan baaritaan joogto ah oo ku saabsan maktabadda music aad casriyeysan. Taasi waxay sidoo kale macnaheedu ma waxaad ku dari kartaa songs u playlist Smart gacanta. Lugood uu idin ​​siinayo xaaladaha u dhigay sidii shuruudaha Playlists Smart ah; oo ay ku jiraan Artist, Album, Sanadka, Song Name, (Date) Last ciyaaray, Date Added, sifayn, laxamiistaha, My Rating, Play Tirada iyo wax ka badan.
Talaabooyinkaasi waxay ku abuuraan Lugood Smart playlist la mid tahay playlist caadiga ah. Dooro New Smart playlist ka File menu. Suuqa ayaa soo socda (sida lagu muujiyey in shaashada ah) muuqan doonaa:
Sii wad in ay doortaan ama u qeexaan shuruudaha aad. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in aad rabtid in aad heesaha oo dhan aad tagi by Britney Spears. Smart playlist ayaa markaas u soo ururin doonaa hees cusub kasta iyada oo si joogto ah waxa ay sii kordhineysaa in ay playlist ah (haddii ay jirto wax xad item dhigay iyo Casriyaynta Live calaamadsan).
Farqiyada u dhexeeya playlist iyo Smart playlist
Lugood playlist iyo Smart playlist yihiin labada liisaska song, laakiin sida ay dhab ahaan yahay gebi ahaanba kala duwan. Kan ahayn, ay gebi ahaanba waa isku mid. Waxaad isticmaali kartaa nidaamkii isla in ay dib u kor, soo dejinta ama dhoofin Playlists Lugood iyo Smart Playlists.
Waxa kale oo aad u bedeli karaan Smart playlist ah in playlist caadiga ah marka hore dhoofinta Smart playlist iyo gacanta ay mar kale soo degida gal Lugood .